विशिष्ठ – Online National Network
सुन्दर पन्थी, रानिवन, काठमाण्डौ ५ श्रावण २०७७, सोमबार ०४:१२
एक उच्च ओहोदाको प्रशाषक वा नेता, पहीरन को हिसावले, दोैरा सुरुवाल टोपिमा आफ्नो गाडी वाट कुनै रेष्टुरेन्ट भित्र वडो शानका साथ छिर्छ, मालीक उहालाई लिन ढोकासम्म आईपुगे, फुल मालासहित स्वागतको लागी ।
गेटमा बशेको पालेको हुर्मत लिए सलाम नठोकेकोमा, बिचरा पालेदाई निकै दुखका साथमा यो जागीर पाएका थिए त्यो उनको पहिलो दिन थीयो जागिरको, निकै आत्तिए । माफी माग्न लगाईयो, माफी मागे र आउने जाने सबैलाई सलाम ठोक्दै ढोका खोलि गेटमै व्यस्त भए, भित्र के भयो उनलाई थाहाभएन ।
करीव दुई घण्टा पछी प्रशाषक ढलमलाउदै गेट मा आई बजारीए र वेहोश हुनपुगे राती वार बजीसकेको थियो रेटुरेन्ट को डिउटी सकिसकेको थियो, उनले भित्र मालीकलाई सूचना पुराए । भित्रवाट जवाफ आयो गेट वाहिर हो भने गाडीमा राख्दीनु, मेनगेटमा ताला लगाएर घर जानु ।
पालेदाईले पहीलो गेटमा तालामारी आफ्नो चावी खल्तीमा राखे, नजीकै गएर एकचोटि पाहुनो निरीक्षण गरे शास चलि रहेको थियो, टाउको ठोकिएको ले निधार वाट भने रगत वगि रहेको थियो । विस्तारै उठाएर उनकै गाडिको आडमा आडेश लगाई दिए नजीकै आधा भरी पानीको बोतल कसैले खाएर फालेको वाट पानिले छम्के , विशिष्ट ले विस्तारै आँखा खोले । पाले दाईले आफ्नो रुमालले उनको घाउमा वादिदीए ।
विशिष्ठ उठ्ने कोशिष गरे सकेनन्, पाले दाईले उठाएर गाडी भित्र वस्न सहयोग गरे । पालेदाई आफ्नो डेरा तर्फ लागे । उनलाई निद्रा परेन उनी पुन रेष्टुरेन्ट फर्के, विशिष्ठ लाई आफ्नो डेरामा ल्याएर सुताए ।
विहान प्रशासक नेताको होश खुल्यो, हिजोको घटनाहरु उनको अगाडी उभिए, लाजले ग्लानीले उनि भुतुकै भए, शाहाश जुटाएर पाले संग माफी मागे । पालेदाई मुस्कुराउदै भने ः
एउटा असल सासक हुन ब्यक्तिगत रुपमा कोशिस गर्नुहोला, सकिने र सबैले प्रयास गर्नू पर्ने केहि विषयहरु अनुमति भए भावना हरु व्यक्तगर्ने कोशिष गर्छु । यी मेरा सम्पुर्ण व्यक्तिगत धारणाहरु हुन् यस सम्बन्धमा कुनै खोज गरीको होइन यि मेरा भोगाईहरु हुन् ।
एउटा कुसल शासक जहीले पनि अरुको भावना बुझ्न सक्ने र अरुको पीरमर्का समानुभूत गर्न सक्ने भने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । साहानुभुति दर्शाउन नसक्ने शासक क्रुुर देखिन्छ , क्रुुरताले कायरता तर्फको कित्तामा उभ्याउँछ, छनोट स्वयमको हो । कायरको कित्ता जहीलेपनी हिन्सा तर्फ उन्मुख हुन्छ । असल शासकले युद्ध होइन, शान्तिको चाहना गर्दछ तथा उसले शान्ति र सम्मतिद्धारा शासन गर्दछ । शक्ति पद्धतिबाट सुसज्जित हुनुपर्दछ । हजुरको हेपाहा प्रबृति शायद जिवनभरको दविद मानशिकताको उपज होलाभनी हिजोनै माफी दिएरनै हजुरलाई लिएर आएको हुँ, पदमा हुँदा, पावरमा हुँदा मानवता भुल्लुहुदैन, यौवन र पावर ढिलो चाडो खस्कीनछ नै भन्ने शोचेर व्यवाहार गर्दा जिवन जिउन सहजहुन्छ ।
प्रसाशक भन्छः अरुको चाहना, इच्छा अनुरुप चल्दा त जोगि भैहालिन्छ नि, राजनिति, कुटनिति कोही जोगीहुनलाई गर्छ त ? तर तपाईलाई मैले धेरैनै चिने जस्तो लागी रहेको छ, को हो तपाई ?
पाले दाई भन्दछन् ः चरित्रको जुन मूल्य छ, त्यो बराबर अरु कुनै बस्तुको मूल्य छैन् । राम्रो चरित्र, स्वभाव होइन योे सम्पत्ति नै हो । ठग जति चलाख भयो त्यति नै हानी गर्छ र सञ्जन जति– जति चलाख भयो उसले त्यति नै हित गर्छ । मानिसलाई राम्रो कुराको असर पर्न निकै समय लाग्छ, जसरी घर बनाउन समस्या छ तर घर भत्काउन कुनै बेर लाग्दैन ।
पद्धति वसाल्न, चरीत्र निर्माण गर्न समय लाग्छ, त्यसैले नेतामा धैर्यता र शाहास दुवै अत्यावस्यक छ । आचरण नष्ट गर्नु भनेको आफै नष्ट हुनु हो । म संग माफी मागेर मलाई लज्जीत नगर्नुहोस अशल शासक हुने कोशि गर्नु होला । म तेहि स्कुलको पालेहु जसले तपाई लाई सडकवाट स्कुलको होस्टेल सम्म पुराएको थिएं । प्रशासक नेता स्तब्ध हुन्छ ।